Sheeko Jaceyl Qaaban iyo Gurxan | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
Sheeko Jaceyl Qaaban iyo Gurxan
Gaabeey waxay ahayd Gabar Soomaaliyeed oo uu Allah ugu roonaaday Qurux muuqata iyo mid dahsoon intaba; walow ay ragga qaarkood ku duri jireen xagga gaabnida, oo ay hoos ugu dhigi jireen Oraahda ah:-“Wey gaaban tahay iyo wey qurxoon tahay isma raaci karayaan”. Laakin rag kale ayaa ku difaaci jiray Oraahdii ahayd:-“Gabar haddii uu Gacalkaagu galayo, ha gaabanaato oo ha guduudanaato”.
Dooqa raggu si kastaaba ha u kala geddisnaadee, Gaabey waxay ka mid ahayd Gabdhihii reer Muqdisho ee 60-meeyadii laga daba-dhacay. Ninkii ay soo ag-martaba, Indhaha ayuu la sii raaci jiray.
Dhal-magaal ayay ahayd Gabadhu, waayo Xamar ayay ku dhalatay, ku barbaartay, Indhahana ku soo kala qaaday. Weligeed meel Miyi ah, qaab loo dhaqdo Xoolo iyo Xayawaan duur-joog ah, in ay dhegaha un ka maqasho ama sawirkooda daawato mooyaane, Indhaheeda ma ay saarin.
Gurxan wuxuu ahaa Laba-lafood doobnimo ku raagay. Miyiga fog ee dalka ayuu ku dhashay, ku barbaaray, Geelna ku soo jiray. Laakin ugu dambayntii wuxuu soo galay Muqdisho, si uu ugu biiro Ciidammada qalabka sida.
Deg-deg ayaa Gurxan loogu qoray Ciidanka, waxaana loo bilaabay Mushaar. Laakin intii uusan la qabsan Magaalada Xamar, ayuu durba Isha ku dhiftay Gaabeey, oo uu kula kulmay Xaafad uu Fiidyadii soo gaari jiray.
Jacayl xoog leh ayaa galay Gurxan. Wuxuu la hadlay Gaabeey, oo u sheegay: inuu rabo barashadeeda iyo la-sheekeysigeedaba.
Xaafad ayay ballan ugu dhigtay. Fiidyadii ayuu u imaan jiray. waa laysu firaaqeyn jiray, si ay u wada-hadlaan, isu-bartaan, isu-fahmaan, meelna wax isula dhigaan.
Markii kasta oo uu Gurxan la kulmo Gaabeey, wuxuu uga sheekeyn jiray: Noloshii Miyiga; Geel tira badan oo uu leeyahay isagu; Geel la kala dhacay; Geel uu isagu ka soo dhiciyay Libaax; Colaad laba reerood; Kala-aar-goosi;Gaajo iyo Harraad oo uu u soo adkaystay iyo waxyaabo kale oo la xiriira Nolosha Miyiga.
Sheekooyinkaas, waxaa uu Gurxan uga dan lahaa: In uu Gaabey u soo bandhigo, oo u muujiyo Geesinimadiisa, Kartidiisa, Dadnimadiisa dheeraadka ah, Geel badan oo uu leeyahay iwm. Waxay ujeeddadiisu ahayd: in ay la dhacdo Gabadhu oo jeclaato isaga.
Laakin, docda kale,laba kala bariday kala war la’e, Gaabeey wax qiimo ah uma ay arkayn Arrimaha uu ka sheekaynayo Gurxan, balse waaba ay dhibsanaysay sheekooyinka noocaas ah, oo ayan dhab ahaan u aqoon dulucdooda.
Waxay ka door-bidaysay, oo rabtay: in uu Gurxan uga sheekeeyo: Guur toos ah, ujeeddadana abbaaro. Inuu soo hadal-qaado Dahab uu u iibinayo; Villo uu dejinayo;Gaari; Nolol raaxo leh; Degganaan i, Colaad la’aan iyo qaabab nololeed kale oo reer-magaalnimo.
Habeenkii dambe ayay Gaabeey si toos ah uga hor-tagtay Gurxan, iyada oo caraysan. Waxay ku war-gelisay: inuusan mar dambe u imaan, oo waqtiga ka lumin. Waxay u sheegtay in ayan doonayn la sheekaysigiisa iyo isagaba.
Gurxan ayaa ka xumaaday taas, dhabarka ayuuna tusay Gabadhii isagoo isla hadlaya(wuu tagay).
Dadkii Xaafadda iyo Asxaabtii arrinka la socday, ayaa waxay weydiiyeen Gaabeey sababta ay u eriday Ninka u soo shukaansi tagay(xod-xodasho) ee u soo muraaday iyada ee jeclaaday..!!.
Gaabeey ayaa waxay ku jawaabtay:-“Yaaqaay Ninkaan camal, maba rabo aniga, waxaas iiga sheekeehaa Geel la dhacay, Dagaal, Cabsi, Argaggax,Nolol rafaad leh iyo degganaansho-la’aan….kan camal maba i anfacaayo aniga.Jacaylkiisna bul Allaha siiyo..”….!!.
Qiso Dhab ah oo ka dhacdey Jabuuti: Waayaha Jacaylkiyo Jaandaramarigga Jabuuti waalidka iyo mucaashaqiinta maxaa kala heysto